Soomaali-British noqdey qofkii ugu da'da yaraa ee Covid-19 uu ku dilay UK
Qoyskiisa oo xaqiijiyey in uusan horey u qabin cuduro kale ayaa horey aabahood uu u dhintay Kancsar.
LONDON, UK – Wiil Soomaali-British ah kaas oo 13-jir ah isla markaana dhigan jiray iskuul ayaa wuxuu noqdey qofkii ugu da'da yaraa ee Coronavirus uu ku dilay gudaha UK, illaa iyo haatan inta la diiwaan-geliyey.
Ismaaciil Maxamed Cabduwahaab oo deganaa Brixton, koonfurta London, ayaa Isniintii ku dhintay isbitaalka King’s College markii xanuunka Covid-19 laga helay Jimcadii lasoo dhaafay, sidda la sheegay.
War-saxaafadeed kasoo baxay qoyska ayaa lagu qiray Ismaaciil lagu arkay astaamaha fayruska oo ay kamid tahay in ay ku adkeyd neefsashada. "Markii uu galay koomo, shalay ayuu geeriyooday".
Reerka, oo aabahood uu u geeriyooday cudurka dilaaga ah ee Kancsarka, ayaa tilmaamay in da'yarka uusan horey u qabin xanuuno kale.
Koleejkii uu dhigan jiray oo lagu magacaabo Madinah College ayaa durba bilaabay olole ay ku daboolayaan qarashka aaska ama duugta.
"Waxaan ALLE uga baryeenaa in uu naxariistiisa ugu bedelo mudadii adkeyd ee xanuunka uu la noolaa," ayay ku yiraahdaan war qoraal ah.
Guud ahaan Ingiriiska, Coronavirus wuxuu galaaftay 1,800, qeyb kamid ah dadkaas oo dhan 393 waxay dhinteen 24-kii saac ee lasoo dhaafay, sidda ku xusan warbixinta Waaxda Caafimaadka.
Saddex meelood hal dalool, shaqsiyaadka u dhintay colkaan daahsoon ayaa lagu waramay in ay kasoo jeedaan magaala madaxda London.
Tan iyo markii uu bishii December ka dilaacay Wuhan, bartamaha waddanka Shiinaha, fayruska oo ku faafay 179 ayaa dilay in ka badan 41-kun, iyaddoo uu soo ritay 850,000. Tiradda kasoo bogsootay waa 176,000.
Carro ka dhalatay shaqo joojin lagu sameynayo baarlamaanka UK
Caalamka 28.08.2019. 20:28
Dood ka dhalatay fal ay ku kacday wasiir ka tirsan Ingiriiska
Caalamka 13.10.2019. 20:49
Dadweynaha Ingiriiska oo u dareeraya doorasho taariikhi ah
Caalamka 12.12.2019. 07:02
Caalamka 26.05.2020. 16:05